Musambiik - BBC News Somali
Sidee ayuu u dhintay hoggaamiyihii "Al Shabaab" ee Mozambique
Andre Hanekom ayaa la xiray bishii Agosto, waxaana lagu eedeeyay inuu hoggaaminayay koox jihaad-doon ah oo ka dagaalanta waqooyiga dalka Mozambique.
Sababta looga kala dareerayo xukuumadda Trump
Mas'uulkan ayaa kamid ah dhowr wasiir oo shaqada ka tagay intii uu madaxweynaha ahaa Mr Trump.
Ma xiriir baa ka dhaxeeya ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo kan dalka Musaambiik
Taliyaha booliska dalka Mozambique, Bernadino Rafael, ayaa waxa uu sheegay in 90 qof la dilay ku dhawaad 70 kalana ay dhaawacyo soo gaareen tan iyo markii urur Islaami ah uu sanadkii la soo dhaafay dalkaasi ka bilaabay inuu weerraro ka gaysto.
6 Oktoobar 2018
Shirkadda Dheemanka soo saarta ee Koonfur Afrika ayaa raraysa maroodi tiro badan
Maroodiyadan ayaa ku nool kayn ku taala meel ay shirkadda ka qoddo dheemanka qaaliga ah.
Dayaarad Ra'iisul wasaare qaadi lahayd oo shidaal loo waayey
Guddiga maamulka dayaaradda LAM Airlines ee Mozambiik ayaa shaqadii laga eryey, ka dib markii ra'iisul wasaaraha dalka iyo rakaab kale ay xayirmeen, ayadoo dayaaraddii qaadi lahayd loo waayey shidaal lagu shubo.
6 Luulyo 2018
Seddex dagaalyahan oo Islaamiyin ah ayaa lagu xiry gobolka Nampula oo dhaca waqooyiga dalkaasi Mozambique, kuwaasi oo loo qabtay dilal is xig-xigay oo gobolka ka dhacay tan iyo bishii October, waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha gudaha Basilio Monteiro.
Magaalada catarka ee Hindiya : Warbixin & Video